चित्रबहादुर केसीले किन औंल्याए नेपालमा राजतन्त्र पुनस्र्थापनाको खतरा ? – Pahilo Page
चित्रबहादुर केसीले किन औंल्याए नेपालमा राजतन्त्र पुनस्र्थापनाको खतरा ?
४ मंसिर २०७५, मंगलवार १६:४७ 717 पटक हेरिएको
काठमाडौं, ४ मंसिर । राष्ट्रिय जनमोर्चाले अझै पनि मुलुकमा राजतन्त्र पुनस्र्थापना हुने खतरा रहेको औंल्याएको छ । यसप्रति सबै सचेत हुनुपर्ने उसको अपिल छ ।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पार्टीले आफ्नो अवधारणापत्र सार्वजनिक गर्दै यस्तो खतरा औंल्याएको हो । कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री चित्रबहादुर केसीले भारतमा हिन्दूवादीहरुको सरकार भएकोले नेपालमा पनि पूर्वराजा र राजावादीहरु हिन्दू धर्मको नामबाट जनतामा भ्रम फैलाउन अभ्यस्त रहेको गम्भीर आरोप लगाए ।
नेता केसीले भने, ‘‘अहिले पूर्वराजा र राजवादीहरु नेपालमा धर्मको नाममा राजनीति गरिरहेका छन् । र, भारतको अनुकूलतामा नेपालमा संघीयता आएकोले यो व्यवस्था कमजोर हुन्छ । त्यही कमजोरीमाथि टेकेर राजतन्त्र व्यँुतिने खतरा पनि उत्तिकै छ । संघीयता खारेज नगरिकन नेपालमा गणतन्त्र सुदृढ हुने अवस्था देखिँदैन् ।’’ कार्यक्रममा पार्टीको अवधारणापत्र अध्यक्ष केसीले वाचन गरेका थिए ।
कार्यक्रममा नेकपा मसालका प्रवक्ता रामप्रकाश पुरीले सही वस्तुगत अवस्था नभई जनवादी गणतन्त्र आउने अवस्था नभएको हुँदा तत्काल यही गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई नै सुदृढ गर्दै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।
त्यस्तै कार्यक्रममा मोहन बैद्य नेतृत्वको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीको पोलिटव्यूरो सदस्य दिनेश शर्माले प्रतिगामी खतराको विरुद्ध क्रान्तिकारीहरु एकजुट भएर जानुपर्ने बताए । उनले भने, ‘‘त्यसको लागि संयुक्त कार्यक्रम बनाएर जानुपर्छ ।’’